China Custom 28/400 28/410 28/415 Plastika PP Material Loha Trigger Triger Sprayer ho an'ny fanamboarana tavoahangy sy orinasa | Yongxiang
Custom 28/400 28/410 28/415 Plastika PP Material Loha Trigger Triger Sprayer ho an'ny tavoahangy
Ny sprayers Trigger dia manana endrika 9 samihafa amin'ny fonon'ny sprayer ho anao hisafidy. Misy habe 3 fanakatonana azo isafidianana: 28/400,28/410 ary 28/415. Ny safidy nozzle dia misy tifitra, renirano ary miala. Ny tendany dia mifanaraka tsara amin'ny tavoahangy, izay afaka misoroka ny fivoahana. Ny fiasan'ny trigger dia tifitra misy fiantraikany tsara amin'ny atomization. Ity karazana trigger sprayer rehetra ity dia afaka manana nozzle foam fanampiny.
loha miaraka amin'ny makarakara tsy mitongilana. Momba ny loko vokatra, miankina aminao izany!
Ny trigger sprayer dia ampiasaina amin'ny fanadiovana vokatra sy fanondrahana zavamaniry. Ny sprayer trigger miaraka amin'ny foam nozzle dia afaka mamokatra foam manankarena sy marefo, matetika ampiasaina amin'ny mpanadio varavarankely, fanadiovana an-dakozia, ary ranon-javatra hafa.
Habe: 28/400, 28/410, 28/415
Fitaovana: PP, PE, POM, 304 STAINLESS vy, GLASS BOLA
Fatra: 0.8-1.2 ML/T
QTY ho an'ny container 20″: 190,000-220,000PCS
QTY ho an'ny 40 ″ container: 460,000-500,000PCS
On / Off Nozzle
Ity Trigger Sprayer ity dia miaraka amin'ny zipo misy ribbed ho mora ahodinkodina miaraka amin'ny tanana malama sy fidirana mora amin'ny atiny ao anaty tavoahangy. Ho fanampin'izany, ity mpitsindroka trigger plastika fotsy fotsy ity dia misy nozzle On/Off eo amin'ny tendron'ny sprayer. Azonao atao ny manodina ny nozzle On/Off manaraka ny famantaranandro na mifanohitra amin'ny famantaranandro imbetsaka mba hanakatona ny fivoahana amin'ny sprayer. Rehefa eo amin'ny toerana tsy mety dia manakana ny mpitsindroka amin'ny fivoahana tsy nahy izy ary mitazona ny trigger amin'ny toerana faran'izay mafy.
Output sy Dip Tube
Ity sprayer trigger zipo vita amin'ny plastika fotsy ity dia manana herin'aratra eo amin'ny 0.8-1.2cc isaky ny tifitra. Raha vao tafapetraka amin'ny toerana On ny nozzle dia mamoaka tsifotra zavona voafehy tsara izay mandrakotra bodofotsy lehibe amin'ny velarantany. Farany, Dip Tube Length: azo namboarina
Farany, vita amin'ny plastika polypropylène (PP) izy io izay voamarika amin'ny kaody famantarana ny resin'ny 5. Ny polypropylène dia kely kokoa noho ny LDPE, somary henjana noho ny plastika hafa. Ho fanampin'izany, ny Plastic Ribbed Skirt Trigger Sprayers dia mety ho tonga amin'ny loko manga, manjavozavo, voajanahary, fotsy, na loko hafa. Ny PP dia manana fanoherana tsara amin'ny harerahana ary manana teboka fandrendrehana avo dia avo (320 degre Fahrenheit na 160 degre Celsius).
Ho fehin-kevitra dia azonao atao ny mampiaraka ity Sprayer ity amin'ny tavoahangy isan-karazany izay mifanandrify amin'ny habe 28-410. Ohatra, ny isa voalohany dia maneho ny savaivony ny kaontenera misokatra sy in (mm). Ny laharana faharoa dia maneho ny halalin'ny kofehy amin'ny sisin'ny fanakatonana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ity sprayer ity dia tsara ho an'ny ranon-javatra rehetra manomboka amin'ny kosmetika ka hatramin'ny vokatra fikarakarana manokana. Rehefa tsindriana ny paompy dia avoaka ao anaty zavona tsara ilay vokatra. Ohatra, ny sprayer dia manana vokatra 0.8-1.2cc isaky ny milina fanaovan-gazety.
Ny tombony azonay dia:
Ny triggery rehetra dia miangona amin'ny milina mandeha ho azy, fa tsy amin'ny tanan'olombelona, ​​​​ary manana milina hanamarina ny vacuum sprayer izahay, noho izany dia natao mba tsy hivoaka raha tapitra ny tendron'ny tavoahangy.
Ny vokatray dia mampiasa akora plastika manta sy loharano tsara kalitao, Ny vatana ivelany dia miaro ny fivorian'ny piston amin'ny fahasimbana mandritra ny fampiasana sy fitahirizana.
Fanadiovana trano fidiovana, Fikarakarana trano, fanadiovana varavarankely, fanasan-damba, fanasokajiana fiara, Fanaraha-maso ny bibikely, fikarakarana bozaka, fampiasana ankapobeny.
Trigger Sprayers amin'ny endrika sy vokatra isan-karazany ho an'ny fonosana indostrialy Mulitple
Ny sprayers trigger dia endri-pamokarana tena ilaina ho an'ny entana famokarana maro, toy ny mpanadio trano sy kojakoja fikarakarana manokana. Amin'ny maha mpamatsy vahaolana fonosana ho an'ny indostria manerana ny solaitrabe, YONGXIANG dia mitazona katalaogin'ny mpitsindroka trigger izay mahafeno ny fepetra takian'ny famokarana ho an'ny mpanadio varavarankely, fanadiovana lakozia ary ranon-javatra hafa.
Rehefa tsy azonao atao ny manapa-kevitra hoe iza amin'ny sprayer no mety indrindra amin'ny tsipika vokatrao na ny fitoeran-javatra efa misy, ny manam-pahaizana momba ny fonosana YONGXIANG dia manolotra fanampiana manokana. Azonao atao ny mifandray amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa YONGXIANG mba hianatra momba ny fandrefesana ny fivorian'ny mpangalatra ary koa mba hiresaka momba ny safidinao amin'ny baiko ambongadiny sy ambongadiny.
Makà iray minitra hijerena ny fifantenana tsara indrindra amin'ny famafazana trigger azo alaina ao amin'ny tahiry YONGXIANG misy tahiry. Apetraho amin'ny Internet izao ny fanontanianao be dia be na antsoy ny ekipa YONGXIANG mba hiresaka momba ny fizotranao famokarana sy ny fe-potoana fandefasana.
teo aloha: Manufacturer Direct Vente Trigger Sprayer 28/400 28/410 Custom Spray Cap ho an'ny Daily Custom Authorized Tube plastika sprayer
Manaraka: Tube Plastic Frosted Foana Tavoahangy Ditin-kazo manitra Refillable Famafazana ho an'ny Dia sy Fanomezana, Mini Portable Pen
Trigger Sprayer tavoahangy
Lohan'ny Trigger Sprayer
Famokarana mivantana famatsiana plastika orinasa paompy he ...
Oral Sprayer Best Selling Promotional Price Ora...
Matihanina plastika Foam Foam Dispenser 40MM ...
Mpanamboatra mivantana Trigger Sprayer 28/400...